Izindawo zokuhlala e- Les Tilleuls - I-Airbnb
Izindawo zokuhlala e- Les Tilleuls
Le Vésinet, Île-de-France, i-France
I-villa itholakala endaweni ezolile futhi ethulile yedolobha lasePoissy. Kuqhele ngemizuzu engaphansi kwemi-5 (ngonyawo) kuzo zonke izinsiza futhi iseduze nesiteshi, lapho uzofika e-Paris cishe imizuzu engama-20. Ngaphezu kwalokho, usohambweni lwemizuzu emi-5 ukusuka edolobheni lase-Saint Germain-en-Laye, indawo eyaziwa kakhulu ngenxa yomlando wayo, izifunda ezinhle zokuhlala kanye ne-International High School yase-Saint Germain-en-Laye. Konke kuhlanzekile, kumnandi futhi kuhlonyiswe ngokuphelele.
Indlu ivulekile futhi iyakhanya futhi ihlanganisa ubuhle bendlu yakudala, indawo enokuthula kanye nokuba seduze kwenhloko-dolobha.
ubusuku obungu-7 e- Le Vésinet
4.69 · 48 okushiwo abanye
Idolobha lasePoissy linamandla amakhulu, futhi licebile ngokombono wamasiko. IVilla Charles Maréchal, ngokwesibonelo, ingaphansi kwemizuzu eyi-15 ukusuka eSavoye Villa, eyingxenye Yamagugu Omhlaba e-UNESCO.
Indawo emaphakathi yedolobha ingaphansi kwemizuzu emi-5 ukusuka lapho, empeleni iqala ekugcineni komgwaqo. Ibhikawozi elijwayelekile lesiFulentshi ('boulangerie') lingaphansi kwamaminithi angu-2, okusebenziseka ngempela ukudla kwasekuseni.
Ngesikhathi sokuhlala kwakho ngizoba khona ngaso sonke isikhathi ukuze ngikusize futhi ngiqiniseke ukuthi konke kuhamba kahle.
Hlola ezinye izinketho ezise- Le Vésinet namaphethelo